Yimiphi imicimbi yesimo sezulu esibi kakhulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yimiphi imicimbi yesimo sezulu esibi kakhulu?
I-Los imicimbi yezulu eyeqisayo Yilezo okuthi, ngenxa yokuqina kwazo, zidale umonakalo omkhulu ngisho nokufa kwabantu. Lokho okungavamile noma okungafanele isizini esikuyo nakho kufakiwe. Ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke, kukhulunywa ngabo ngokuya ngokwanda, njengoba kuzoba kukhulu kakhulu, njengoba kuboniswe ku ukutadisha eshicilelwe ku-Guardian.
Kepha ziyini ngempela?
1 Ukucindezeleka kokushisa
2 Iziphepho zaseTropical
3 Amagagasi abandayo
4 Amagagasi okushisa
Umkhawulo omkhulu wokucindezela okushisayo abantu abangakumelana nawo ukwanda okushoyo kwe- I-7ºC. Leli nani lingaba ngaphezulu noma liphansi ngokuya ngezimo zemvelo abebehlale kuzo, ngakho-ke, umuntu ngamunye usejwayele. Isibonelo, uma uhlale endaweni lapho izinga lokushisa lihlale lihlale ngaphezu kuka-24ºC, kungenzeka ukuthi uma likhuphukele ku-31ºC unganquma ukuhamba. Futhi, kunezifunda eziningi ezingashiywa zingenamuntu.
Iziphepho zaseTropical, ezaziwa nangokuthi iziphepho, izivunguvungu noma iziphepho zasezindaweni ezishisayo, zibonakala ngokuba indawo yengcindezi ephansi kakhulu, nangomoya ovunguzayo okungenani ongu-120km / h. Ziyingozi kakhulu, futhi ngamazinga okushisa akhulayo, ziba yingozi kakhulu. Isibonelo salokhu iSiphepho uPatricia, okwathi ngo-Okthoba 23, 2015 saba yisiphepho esigabeni 5, esinemimoya efinyelela ku-356km / h.
Zibonakala ngo ukwehla ngokushesha kwamazinga okushisa okubangelwa ukuhlasela kwenqwaba yomoya obandayo, edalwe yimisinga yomoya. Zingaba ngamakhulu ambalwa kuya ezinkulungwaneni zamakhilomitha-skwele. Imiphumela yako nayo ingaba mibi kakhulu: ukulahleka kwempilo (okwabantu kanye nezinye izilwane), ukulimala okukhulu ezitshalweni, futhi kungadala nokulimala kwamapayipi uma kungavikelekile kahle.
Ukushisa okushisayo eYurophu ngo-2003
Amagagasi okushisa yizikhathi lapho izinga lokushisa lihlala liphakeme kunokujwayelekile isikhathi eside endaweni ebanzi noma engaphansi. Imiphumela yalezi zimo zezulu ezimbi kakhulu miningi futhi yehlukene, phakathi kwayo sigqamisa: ukulahleka kwezitshalo ngenxa yesomiso esikhulu, ukwehla kwemfuyo kanye nezimpawu ezifana nokugula okujwayelekile kubantu.
Imicimbi yesimo sezulu esibi kakhulu iyinkinga enkulu kakhulu engadala umonakalo omkhulu kubantu. Ukuze sizigweme, kulula ukunaka izexwayiso zesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Yimiphi imicimbi yesimo sezulu esibi kakhulu?
pablo gamon kusho
ukushicilela okuhle kakhulu kulungile lokho kuphela angikwazi ukusho okuningi ngoba angikwazi ukucabanga nganoma yini enye: v
Phendula pablo gamon
3 ukwazi mayelana neziphepho